Uluhlu lweeMidlalo zeMelodramas ze-Classic
I-Tearjerkers Enkulu iqinisekile ukuba i-Tug Heartstrings
Ingqungquthela yedrama, i-melodrama yayifom eyaziwayo ngexesha leklasi apho amabali aphuculwe kwaye ngamanye amaxesha ayengxakile ukwenzela ukuba athengise iintliziyo zabaphulaphuli kunye nokwandisa amava abo. Ngokuqhelekileyo, ezi ifilimu zijolise kwizicwangciso ezivakalayo ezinxulumene nentlekele, ukulahleka, kunye nothando olungenakunqwenelekayo, kwaye kubonakaliswe abaxhasi bexesha elide, phantse rhoqo, bezama ukulwa neengxaki ezingenakwenzeka.
Kwizandla ezingafanelekanga, i-melodrama yayinakho ukubeka i-campy ne-sentimental-overmental, ekhokelela kumbono ongalunganga kulo hlobo. Kodwa abalawuli abanezakhono ezifana noGeorge Cukor, uDouglas Sirk, noWilliam Wyler benza iindilo ze-melodramas ezintle kwaye bancedisa ukwenza enye yezinto ezidumileyo kwiminyaka ye-1940 kunye ne-50s. Nazi izibonelo eziyisixhenxe eziphezulu ze-melodrama.
Enye yezinto ezinzulu zokuzilungelelanisa ngazo zonke iixesha , iWuthering Heights yayiyidrama yokuthandana ngokuphathelele ukwahlukana kweklasi kunye nothando oluye lwahlaselwa yintlekele. Ekhokelwa nguWilliam Wyler evela kwincwadi yesiqhelo yase-Emily Brontë, le filimu yabonisa uLaurence Olivier njengoHeathcliff, owayengumntwana oyintandane ethatyathwe kwintsapho ecebile kwaye ekhula ekuthandeni udade wakhe okhulileyo, u-Cathy (Merle Oberon). Nangona uvakalelwa okufanayo, uCathy akafuni ukuyeka ukuphila kwakhe kakuhle kwaye uya kutshata nommelwane ocebileyo (uDavid Niven), eshiya iHeathcliff enobukhwele engenakukhetha kodwa ukuhamba. Emva kokubuya njengomntu ocebileyo kamva, uHeathcliff usasazela uCathy, kodwa ngokuphindaphindiweyo uyatshata noodadewabo womyeni wakhe (uGeraldine Fitzgerald) ezama ukukhwaza umona wakhe. Okwangoku, uCathy ukhula ugule ukufa kwaye uHeathcliff ukhula ube ngumntu omdala onomvandalo, kuphela ekuhluphekeni kwakhe. IiWuthering Heights zatyunjwe kwiiKhosi zeeMali ze-Academy, ezibandakanya i-Best Picture.
Nangona abaninzi bebambona njengomlingani wakhe wokudansa u-Fred Astaire, uGinger Rogers wayenobuncwane obukhulu obuku-Oscar kule ngqungquthela yomdlalo wencwadi ka-1939 kaChristopher Morley. Utshilwa kwi-flashback, njengama-melodramas amaninzi, ifilimu yambamba uRogers njengesihloko esithi Kitty, umthengisi onamaphupha okwenza kuye, kodwa nokho utshata noWyn Strafford (uDennis Morgan), kuphela ukuchithwa ngenxa yokungafani kweklasi. Ugijima kwiingalo zogqirha ogama linguMark Eisen (uJames Craig), emva koko ujika umsila xa evuma ukutshata noWyn emva kokubuya kwakhe. Kodwa ukungafani kweklasi kuhlala kunye kwaye intsapho kaWyn ayimthandi ngoxa enqaba ukushiya intsapho yakhe inzuzo yeKito. UChints ushiya uWyn kwaye ufunda ukuba ukhulelwe, kodwa uyaziqhenya ngokubuyela kuye. Ekugqibeleni, uyabuhlungu ngokuzalwa ngokuzalwa kwaye abuyele emsebenzini wakhe wokuthengisa xa evuma ukutshata noMarko. UFilo Foyle wayenalo lonke uhlobo lwama-wild and mes of melodrama yeklasi, okwamvumela uRogers ukuba aphumelele umsebenzi omhle owamnika i-Award Academy ye-Best Actress.
Ekhokelwa ngu-Irving Rapper, Ngoku, i-Voyager yiyona yefilimu ye-weepie eyayiqalisa indlovukazi ye-melodrama, uBette Davis . UDavis wadlala uCharlotte Vale, umfazi obhekene noxinzelelo lokuphila ngonina kumama wakhe olawulayo (uGladys Cooper) ekugqibeleni uqala ukukhulula kwi-psychiatrist (Claude Rains). Ngokwenene, uthatha uhambo oluya elwandle, apho adibana khona nomyeni ongenaluthando, uJerry Durrance (uPaul Henreid), otshatile umfazi onomona onobukhwele. Njengoko uCharlotte ezama ukutsala intombi kaYerry ephazamisekile yintliziyo ebuya ebudeni, uyangena ebubudlelwaneni nomnye umntu (uJohn Loder) ongaphumeleli ukukhupha uJerry engqondweni. Nangona engamfumani indoda yakhe, uCharlotte uyaba nokuzithemba ngakumbi, njengokuba ngoku, i-Voyager iphetha kwiphepha elithembekileyo kunye nomgca weklasi owaziwayo, "Musa ukucela inyanga, sinenkwenkwezi."
Umxube wefilimu omnyama kunye ne-melodrama ekhokelwa nguMichael Curtiz, uMildred Pierce wayengumfanekiso obalaseleyo owawunqoba uJoan Crawford kuphela kwi-Academy Award ye-Best Actress. UCrawford wadlala isihloko esithi Mildred, umlindi okhuselekileyo ozama ukubonelela ubomi obulungileyo kwiintombi zakhe ezimbini emva kokuqhawula umyeni wakhe okhohlakeleyo (uBruce Bennett). Ngomncedisi we-ejenti ye-real estate (Jack Carson), uMildred uba ngumnini wevenkile kwaye ukhula ngokukhawuleza ishishini lakhe kwiqhina eliphumelelayo, kodwa kunzima ukugcina intombi yakhe endala, uVera (Ann Blyth), uyavuya. Emva koko uyangena emtshatweni ongenalo uthando kunye noMasipala waseRorgan owayesicebile (uZachary Scott) ukuze aphucule ukuma kwakhe aze aphumelele kwiVera. Kodwa uMetro ujabulela indlela yokuphila yokudlala umdlalo kwaye udla uMildred ngemali yakhe, ekhokelela ekutshatyalalisweni kwemali kunye nokubulala kwakhe ngesichotho sezibhamu. I-ofisi enkulu ebaluleke kakhulu kunye nebhokisi, uMildred Pierce ngokuphumelelayo wadibanisa iintlobo ezimbini ezidumileyo xa evuselela umsebenzi weCrawford.
Ekhokelwa nguDavid Lean ukusuka kwi-Noël Coward edlalwa ngokugqithiseleyo umdlalo. Ubomi , ukudibanisa okufutshane kwakuyidrama enhle, kodwa iyintliziyo ebantwini ngabantu ababini abazimisele ukuhlala ubomi obungonwabi. Ifilimu yenkwenkwezi uCelia Johnson njengowesifazane otshatileyo odibana nethuba kunye nodokotela (Trevor Howard) kwisikhululo sesitimela emva kokubamba iqela kwiso lakhe. Uyakususa kuye kunye nezinye iintlanzi ziqala ukuhamba, njengoko zibini zidibanisa kwisikhululo sithuba emva kweveki ukuzonwabisa. Bobabili babelana ngezinto ngokuzodwa kwaye ekugqibeleni bayaqonda ukuba bathandana ngokukodwa. Kodwa ukuqonda kukukhokelela kwingcamango embi yokuba bobabini abakwazi ukushiya intsapho yabo, okukhokelela ekuthandweni okungenakunqwenelekayo kunye nokuphila ubomi obuyingozi. UJohnson noHoward babengenakuqondakala ngokucacileyo kwiimbopheleleko zabo, kunye noJohnson ufumana utyunjelwa u-Oscar kwi-Best Actress, ngoxa uLean wayegibe umgqomo wakhe wokuqala kuMlawuli oyiNtloko.
Ngokusekelwe ku-Henry James ka-1880 inoveli yaseWashington Square , iHeiress yahlawuliswa ngokuthi "umfanekiso ohambelayo ngokwenene" kwaye yafumana inkwenkwezi yayo u-Olivia de Havilland wesibini kunye no-Oscar wokugqibela. Ekhokelwa nguWilliam Wyler, ifilimu eyayinenkwenkwezi yakwaDe Havilland njengoCatherine Sloper, intombi engumntu ongenamdla kunye nomntu ocebileyo, kodwa udokotela olawulayo (uRalph Richardson). Uthandana nomfana omhle, uMorris Townsend (i-Montgomery Clift), kodwa uyise uyabona ukuba uphumelele imali kwaye usongela ukucima ifa likaCatherine. Ukuthatha ukuma kokuqala ebomini bakhe, uCatherine ufuna ukuba atshate uMorris. Kodwa esikhundleni salowo, uMorris uphawula uCatherine aze amshiye aphelelwe yintlungu, ngoxa uyise ufika ekufumaneni ukuba wayemlimaze kangakanani intombi yakhe. Kwiminyaka kamva, uMorris ubuyela kunye noCatherine kwakhona uyavuma ukuthetha, kodwa ngeli xesha ujika etafileni kuye kwaye ubonisa ukuba akayi kuvumela ukuba aphinde aphinde asebenze.
Ngaphambi kokuba umdlalo we drama u- Dallas ubonakalise ubomi obukhohlakeleyo bee-tycoons zeoli zaseTexas, kubhaliwe kwi-Wind , i-melodrama engumququzeleli ekhokelwa nguDouglas Sirk. Ukutshintshwa kwincwadi yesi-1945 nguRobert Wilder, u-Robert Stack obenomdla wefilimu njengoKyle Hadley, unyana ongeyingozi onotywala kwi-baron oil oil (Robert Keith). Ngoodade wakhe osenyameni, uMarylee (uDorothy Malone), indlela yokuphila eyonakalisa uKyle yenza ukuba akwazi ukugcina ubudlelwane obunentsingiselo. Uyakwazi ukutshata noLucy ( uLauren Bacall ), isigqeba sokubhengeza intloko-nqanaba, kunye neempembelelo zokubethela ibhotile. Kodwa ukungakwazi kwakhe ukumbamba umntwana kuholele ekuweleni kwinqwelo kunye nokumangalela umngane wobuntana uMitch (iDonald Hudson) wokuba nomlingani noLucy xa ekhulelwa, okuphumela ekufeni kukaKyle kunye noMitch xa ecaleni lokubulala kwakhe. Ukuqhaqhaqhaqhaza, kubhaliwe kwiMoya kwenziwa ngexesha lokuphakama kohlobo lwentlobo, olwaluqala ukunikezela kwiidrama ezingaphezulu kweminye kamva kwiminyaka elishumi.
8 Iiklasi eziqhagamshelana noBette Davis
Jack Lemmon kunye namaBhayisikobho eBilly Wilder Classic
9 Iimifanekiso zamaKrisimesi zeKlasikhi
I-Greater Movies Classic ene-Elizabeth Taylor
UHumphrey Bogart no-John Huston amaFilimu
Ukuvakalisa i-K ne-Q
URaymond Chandler's Hardboiled Prose Style
Igalelo likaGabriel Prosser
UMartin Luther King Jr. Ukubhala Kubongoza
IBhayibhile YeBhayibhile Ngomonde
Amapolisa, Ukukhangela kunye Neenkukhu Zokuhlangula: Iingxabano zamaLungelo eSilwanyana
Ngaba 'Kuye Kubalulekile Ukuba' Ufuna Ukuhlanganiswa?
Iifom ezenziweyo zeeLwimi
Imbali yeFesta della Repubblica Italiana
Imfazwe yaseMexico naseMelika: iCallet's Campaign
AmaRekhodi e-World Meter 200